धोकेबाज जीवनसाथीको ५ यी बानी र सङ्केतहरू । थाहापाँउनुहोस् - Himali Patrika
धोकेबाज जीवनसाथीको ५ यी बानी र सङ्केतहरू । थाहापाँउनुहोस्
हिमाली पत्रिका २ मङ्सिर २०७६, 9:00 am
अचेल १ जना भन्दा धेरै संग सम्बन्ध राख्ने त फेसन नै बनिसकेको छ एक पार्टनर संग मानिस खुसि हुने नसक्ने अवस्था छ त्यसैले मानिसहरु बाहिरि सम्बन्ध राख्ने गर्छन, कतै तपाइकै जीवनसाथी पनि अर्कै संग सम्बन्धमा त छैनन् ? त्यो जान्नु जरुरि छ तर कसरि जान्नु ? यी संकेत हरु हुन सक्छन जसले तपाईलाई के हद सम्म सहयोग गर्न सक्छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल एकदमै एक्टिभ छ । सामाजिक सञ्जाल मा झुम्ने युवायुवतीहरूको कमी छैन । अझ सामाजिक सञ्जाल मा पनि फेसबुक पछिल्लो समय का युवा युवतीहरूलाई माया गाँस्न सजिलो माध्यम बनेको छ । फेसबुक बाट सुरु भएको कुराकानी बाट मायामा परिणत भएको माया मा कत्तिको इमानदारी हुन्छ । कहिलेकाहीँ यसरी सुरु भएको सम्बन्ध केही दिन र समय को लागि मात्र रहन्छ । धेरै दिन चल्दैन ।
सोशल मिडियाको गलत प्रयोगले प्रेम एक झुटको खेती भएको छ ।त्यसैले अहिले एक इमान्दार जीवनसाथी पाउन मुश्किल भएको छ ।जसको परिणामस्वरुप अहिलेका युवायुवतीहरु मेरो गर्लफ्रेन्ड र ब्वायफ्रेन्डले धोका दियो भन्दै गुनासो गर्दछन् । यो कुराको विश्वास गर्नु निकै गाह्रो छ । त्यसैले यदी तपाईलाई आफ्नो गर्लफे्रन्डमा कुनै शंका छ भने हामी केही संकेत बताउदै छौँ । जसले गर्दा तपाईले सजिलै पत्ता लगाउनुहुन्छ , आफ्नो गर्लफ्रेन्ड धोकेबाज हो वा मायालु । यी बानीहरु हेर्नुहोस !
-यदि तपाईको पार्टनरले अफिस वा कलेजको नयाँ ब्यक्तिसँग भेटेको कुरा अथवा ब्यक्तिगत कुरा लुकाउँछ भने त्यो ब्यक्ति धोकेबाज हो ।
-यदि तपाईको पार्टनरले मोबाइल अथवा फेसबुको पासवर्ड लुकाउँछ भने सम्झनुस् त्यहाँ केही स्वार्थ लुकेको छ ।
-यदि पार्टनरले दोस्रो ब्यक्तिसँग आफ्नो प्रेमसम्बन्धको बारेमा कुरा लुकायो भने सम्झनुस् यसमा पनि केही स्वार्थ छ ।
-तपाईको प्रेमी वा प्रेमिकासँग विचार , भावना र लक्ष्य मिलेन भने प्रेममा धोका हुन सक्छ ।
-यदि पार्टनरले आफ्नोभन्दा बढी तपाईको पैसा खर्च गरी भने सम्झुस् यसमा स्वार्थ लुकेको छ ।